Endaweni: Yakha Idatabase Yedeskithophu Ukuthuthukisa Nokuvumelanisa Indawo Yakho Ye-WordPress | Martech Zone
Uma wenze ukuthuthukiswa okuningi kwe-WordPress, uyazi ukuthi imvamisa iguquguquka kalula futhi iyashesha ukusebenza kudeskithophu noma i-laptop yakho kunokuthi uhlale ukhathazeka ngokuxhuma ukude. Ukuqalisa iseva yedathabhe yendawo kungaba buhlungu impela, kepha… njengokusetha MAMP or I-XAMPP ukuqala iseva yewebhu yendawo, ukufaka ulimi lwakho lohlelo, bese uxhuma ku-database yakho.
I-WordPress ilula kabi ngokombono wokwakhiwa… isebenzisa i-PHP ne-MySQL ku-NGINX noma i-Apache Server. Ngakho-ke, ukuphonsa yonke indawo yokwakhiwa kweseva yewebhu kukhompuyutha yakho ephathekayo kungaba yithoni ngaphezulu ... ingasaphathwa eyokuthi ufunde kanjani ukwethula isiphakeli sewebhu, ukwethula isiphakeli sedatha, bese uxhuma lezi ezimbili!
Okwasendaweni: Ukufakwa okukodwa kwe-WordPress
I-Local yenza ukudala isiza se-WordPress sendawo kube nomoya ophelele, ngakho-ke akudingeki uzihluphe ngokuzihlela ngokwakho. Ukuchofoza okukodwa futhi isiza sakho silungele ukuhamba - i-SSL ifakiwe! Uhlu lwezici luhle kakhulu!
Izinsiza Zesiza - Abomdabu, i-OS-level PHP, i-MYSQL, amasevisi we-web server. Lungiselela amafayela kuzinguqulo ezihlukile ze-PHP, i-NGINX, i-Apache, ne-MySQL konke kuvezwe ukuhlelwa.
Ukuphathwa Kwesiza - Ukushintshanisa okushisayo phakathi kwe-NGINX noma i-Apache, izinhlobo ze-PHP (5.6, 7.3 kanye no-7.4 nge-Opcache), ne-URL Yesiza. Amafayela wokungena kuzinguqulo ezihlukile ze-PHP, i-NGINX, i-Apache, ne-MySQL konke kuvezwe kalula.
Amasayithi weClone - Wonke amafayela, yolwazi, ukumiswa, kufaka phakathi i-URL Yesayithi kungashintshwa ngokuphepha futhi kuhlanganiswe.
Ukuhlukumeza - lungisa ngokushesha i-PHP (i-Xdebug iyatholakala kusuka kufayela le- Umtapo Wezengezo)
Umhubhe we-HTTPS - Izitifiketi ezizisayinelayo zenzelwe ngokuzenzakalela amasayithi amasha. Imigudu yamasayithi ayisisekelo enikezwe i-Ngrok, ama-URL aqhubekayo anemikhawulo yokuxhuma ephakeme, ama-webhooks womugqa wokuhlola, i-PayPal IPN, nama-Rest API
I-WordPress Multisite - ukusekelwa kokufakwa kwesizinda esingezansi nokwesikhombisi esingezansi ngokuchofoza okukodwa ukuvumelanisa isizinda esingezansi kwifayela lababungazi.
Amapulani Esiza - gcina noma yiliphi isayithi njengepulani ukuze uphinde ulisebenzise ngokuhamba kwesikhathi. Wonke amafayela, yolwazi, amafayili wokumisa, nezilungiselelo zasendaweni zizobuyiselwa.
Ngenisa / Thumela - kufaka phakathi amafayela wesayithi, yolwazi, amafayili wokumisa, amafayela wokungena, nezilungiselelo zasendaweni. Khipha amafayela kokuthumela kwakho ngaphandle okufana nezinqolobane zomlando, ama-PSD, izinkomba ze-git, njll.
Mail - I-MailHog ifakiwe ukunqabela noma iyiphi i-imeyili ephumayo evela ku-PHP sendmail yokubuka nokulungisa iphutha (lokhu kusho nokuthi ungahlola ama-imeyili ngenkathi ungaxhunyiwe ku-inthanethi).
I-SSH + WP-CLI - Ukufinyelela kwempande okulula kwe-SSH kumasayithi ngamanye. I-WP-CLI inikeziwe, mane uthayiphe u- “wp” ngemuva kokuvula isayithi le-SSH.
Amaprosesa asekelwe - kufaka phakathi Izinkundla Zomphakathi, ukwesekwa ngaphakathi nohlelo, nokufaka ithikithi.
Vumelanisa futhi usebenzise kusuka ku-Local kuya ku-Flywheel noma ku-WPEngine
Okungcono kakhulu, isibonelo sakho sendawo singasatshalaliswa futhi sivumelaniswe kokunye okumnandi I-WordPress ephethwe ukusingathwa izinkonzo:
Sebenzisa i-WordPress - kuya ligcina uthi lokuphotha luzungeza ukukhiqizwa, ligcina uthi lokuphotha luzungeza isiteji, noma uku I-WP Engine
MagicSync - Amafayela kuphela aguqukile azoboniswa lapho kuhamba phakathi kwezindawo.
I-Local empeleni ikhishwe ngu ligcina uthi lokuphotha luzungeza!
Ukudalulwa: Siyinhlangano ephethwe yi ligcina uthi lokuphotha luzungeza (indawo yethu isingathwa lapha!) kanye I-WP Engine.
Tags: i-apacheconfiglungisa i-wordpressphaka i-wordpressflywheelukuthuthukiswa kwendawofaka amafayelaukuvumelanisaphpsebenzisa i-wordpress yendawosendmailvumelanisa i-wordpressukuvumelanisa i-wordpressWordPressamapulani we-wordpressi-wordpress hostingwp-ehlwpengine